UNGAZISETHA KANJANI KABUSHA IZINTO ZOKUBUYEKEZA ZEWINDOWS KU WINDOWS 10 - I-WINDOWS 10
Uma Unokwehluka Windows 10 buyekeza izinkinga ezihlobene, iWindows Update yehlulekile ukufaka ngamaphutha ahlukile, iWindows Update ibambekile Ihlola izibuyekezo noma Ukulanda izibuyekezo, Ayikwazi Ukuthuthukela Kamuva Windows 10 Okthoba 2018 inguqulo yokuvuselela i-1809 njll. Lokhu kudalwa kakhulu ngenxa okonakele Izinto zokuvuselela, i-Update storage folder (i-software Distribution, i-Catroot2) i-cache ilahlekile noma yonakele. Ungakwazi Setha kabusha ama-Windows update Components ukusetha Okuzenzakalelayo ukulungisa cishe zonke izinkinga ezihlobene nokuvuselelwa kwewindi.
Okuqukethwe umbukiso 1 Setha kabusha ama-Windows Update Components 1.1 Sebenzisa i-Windows Update Troubleshooting 1.2 Setha kabusha mathupha ama-Windows Update Components 1.2.1 Bhalisa kabusha amafayela we-BITS namafayela e-dll ahlobene ne-Windows Update 1.2.2 Susa amanani weRegistry angalungile 1.2.3 Setha kabusha ukumiswa kwenethiwekhi 1.2.4 Qala Izinsizakalo
IMicrosoft Roll out windows evamile enezici ezintsha, ukuthuthuka kwezokuphepha nokulungiswa kwamaphutha okwenziwe izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni. Futhi ku-Windows 10, isethwe ukufaka izibuyekezo zakamuva ngokuzenzakalela. Kepha kwesinye isikhathi Ngemuva kokuvalwa okungafanele, ukuphahlazeka, ukwehluleka kwamandla noma okuthile akuhambanga kahle ngeRegistry yakho, iWindows Update ingahluleka ukusebenza kahle. Njengoba Abasebenzisi Bomphumela Babika windows 10 behluleka ukubheka izibuyekezo noma ukwehluleka ukuzifaka, noma kwesinye isikhathi, akunakuvulwa nhlobo.
Ukulungisa iningi lamawindows update Izinkinga ezihambisanayo I-Microsoft Ikhishwe Ngokusemthethweni Ithuluzi Lokuxazulula inkinga Okuskena Ngokuzenzakalela Nokulungisa Izinguquko Ezihlukile ze-Windows Izinkinga ezihlobene. Sincoma ukuthi uqale usebenze Ithuluzi lokuxazulula inkinga lokubuyekeza bese uvumela windows ukulungisa inkinga uqobo. Uma inkinga ingaxazululeki ungakwazi ngesandla Setha kabusha ama-Windows update Components ukusetha okuzenzakalelayo ukulungisa ngokuphelele izinkinga zokuvuselela amawindi.
Sebenzisa i-Windows Update Troubleshooting
Ukuqalisa ithuluzi lokuxazulula inkinga le-Windows update le-Windows chofoza ku-Start menu search type: Ukuxazulula inkinga bese ushaya ukhiye wokungena. Manje chofoza windows buyekeza bese uqhafaza ku-Run the Troubleshooter njengoba kukhonjisiwe ngezansi kwesithombe. Ithuluzi le-windows update liqala ukubheka izinkinga zokuvuselela, Uma ithuluzi litholakele zama ukuzixazulula uma kungenzeka.
Ithuluzi le-Windows update Troubleshooting
Uma iWindows Update ingasebenzi, udinga ukusetha kabusha futhi ubhalise kabusha zonke izingxenye zensiza. Nakhu ukuthi kanjani.
kungani i-chrome icpu kangaka ibanzi
Setha kabusha mathupha ama-Windows Update Components
Ngokwakho Setha kabusha izingxenye zokuvuselela amawindi , Okokuqala, kudingeka misa i-Background Intelligent Transfer, iWindows Update, i-Cryptographic Services . Lezi zinsizakalo ngokuyisisekelo zivumela iWindows ukulanda wonke amafayela nokubuyekeza asetshenziswa yi-Automatic Windows Update nezinye izinto zeWindows. Isebenzisa umkhawulokudonsa ongenzi lutho woxhumano lwenethiwekhi lapho ukuxhumeka kwakho kungasebenzi futhi kulanda buthule amafayela ngemuva. Ngakho-ke, umkhuba omuhle kakhulu wokukhubaza insizakalo ye-BITS ngaphambi kokuqhubeka.
Ungakhubaza lezi zinsizakalo ngokwenza umugqa othile womyalo. Okokuqala, vula umyalo we-Command njengomlawuli. Bese uthayipha Imiyalo ngezansi.
Ngokulandelayo sizoya susa amafayela we-qmgr * .dat . Ukuze usethe kabusha izinto zokuvuselela iWindows, uzodinga ukususa amafayela. ungazisula ngokwenza umyalo we-bellow.
Olandelayo, Qamba kabusha amafolda weSoftwareDistribution kanye ne-catroot2. Ngakho-ke ukuthi windows zenzele ngokuzenzakalela iSoftwareDistribution entsha ne-catroot2 bese ifaka amafayela wokuvuselela amasha. Ukuze wenze lokhu, ngokushesha komyalo, thayipha imiyalo elandelayo. Qiniseka ukuthi ucindezela u-Enter ngemuva kokuthi uthayiphe umyalo ngamunye.
Manje Sizoya Setha kabusha insiza ye-BITS nensizakalo yokuvuselela iWindows kwisichazi sokuphepha esizenzakalelayo . Ukuze wenze lokhu, ngokushesha komyalo, thayipha bese wenza imiyalo elandelayo.
Bhalisa kabusha amafayela we-BITS namafayela e-dll ahlobene ne-Windows Update
Manje, bhalisa kabusha amafayela we-BITS namafayela e-dll ahlobene ne-Windows Update. Ukwenza lokhu yenza imiyalo elandelayo ngamunye bese ucindezela ukhiye wokungena ukuze uwenze.
Susa amanani weRegistry angalungile
Vula Isihleli Sokubhalisa bese uzulazulela kukhiye olandelayo:
Qhafaza kwesokudla IZINXENYE. Manje kufasitelana lesokudla, susa okulandelayo uma kukhona:
Setha kabusha ukumiswa kwenethiwekhi
Manje, setha kabusha ukumiswa kwenethiwekhi yakho. Kungahle kwephulwe ngokusethwa ngokwezifiso noma ngegciwane, ngohlelo lokusebenza lwe-tweaker oluyingozi noma ngomunye umsebenzisi ku-PC oyisebenzisayo.
Lapho konke sekuphelile, qala kabusha insiza ye-BITS, insiza yokuvuselela iWindows, kanye nensizakalo ye-Cryptographic Esimise ngaphambili. yenza Imiyalo elandelayo ngamunye ngamunye.
Yilokho Konke, Manje Qala kabusha Ikhompyutha Yakho Ukuze wenze ushintsho futhi uqalise kabusha kwikhompyutha yakho yewindows. Ngemuva kokuhlola izibuyekezo zamawindows kusuka kuzilungiselelo -> Ukuvuselelwa nokuphepha -> izibuyekezo zeWindows -> hlola izibuyekezo. Ngalesi sikhathi ngiqinisekile ukuthi ulanda ngempumelelo futhi ufake izibuyekezo zakamuva.
Ngiyethemba ngokulandela izinyathelo ezingenhla ngempumelelo setha kabusha izingxenye zokuvuselela amawindi futhi ulungise iningi lamawindows ahlaziya izinkinga ezihlobene. Funda futhi kusuka kubhulogi Lungisa ama-Protocol owodwa noma amaningi wenethiwekhi awekho kule Khompyutha.
kungani ungasebenzisi i-netflix ku-laptop yami
umshayeli irql omncane noma ongalingani
isithonjana senethiwekhi asibonisi kubha yomsebenzi task windows 10
isici sokuvuselelwa windows 10 inguqulo 1709 ayifaki
ilaptop yami iqhubeka nokunqamula kumawindi e-wifi 10